China PP Jumbo အိတ် ဖြန်းတီးခြင်း ကြိတ်ခြင်း လျှော်ဖွပ် အခြောက်ခံခြင်း ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း စက် ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် စက်ရုံ |PuRui
PP Jumbo အိတ် ဖြန်းတီးခြင်း ကြိတ်ခွဲခြင်း အဝတ်လျှော် အခြောက်ခံခြင်း အမှုန့်ကြိတ်ခြင်း ပြန်လည်အသုံးပြုစက်
ဆောင်ရွက်ဆဲ ပစ္စည်း-ဆပ်ပြာပုလင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဗူးများ၊ နို့ဗူး စသည်တို့မှ HDPE ပုလင်းများ။
အနည်းဆုံး မှာယူမှု အရေအတွက်-1 set
စက်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကုန်ကြမ်း၊သံမဏိ 304၊ ကာဗွန်သံမဏိနှင့် စသည်တို့
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းအမှတ်တံဆိပ်များSchneider၊ Siemens စသည်တို့
မော်တာအမှတ်တံဆိပ်များSiemens ဘေးရှိ၊ Dazhong စသည်တို့သည် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Siemens သို့မဟုတ် ABB , WEG ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အဝတ်လျှော်ပစ္စည်း-PP Jumbo အိတ်
PURUI Recycling Machine Process Material:
လျှော်ကြိုးကို PP ယက်အိတ်၊ ဖလင်နှင့် PE အမှိုက်အိတ်၊ ရုပ်ရှင်၊ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းနှင့် အခြားလျော့ရဲသောပစ္စည်း၊ စိုက်ပျိုးရေးရုပ်ရှင် (1mm)၊ နို့နှင့်အမှုန့်ပါသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး LDPE ဖလင်၊ LDPE အစိမ်းရောင်အိမ်ရုပ်ရှင်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။အစားအစာထုပ်ပိုးခြင်းရုပ်ရှင်၊ စိုက်ပျိုးရေးရုပ်ရှင်၊ အစိမ်းရောင်အိမ်သုံးရုပ်ရှင်၊ ရေနံမြေတွင်အသုံးပြုသောရုပ်ရှင်၊ PP အိတ်၊ PE ဖလင်၊ PP ယက်အိတ်၊ LDPE ကျုံ့ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်ရှင်မျိုးစုံ၊ သဘာဝရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် လေးလံသောပုံနှိပ်ထားသောရုပ်ရှင်၊ ဘိလပ်မြေအိတ်၊ ဆီပြန်အိတ်၊ ညစ်ပတ်သောအိတ်
PURUI ပြန်လည်အသုံးပြုစက်၏ အားသာချက်များ-
1. ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စက်သည် မြင့်မားသောထွက်ရှိမှုနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းမှုစွမ်းရည်
2. ပလပ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလိုင်းတစ်ခုလုံးကို ချေမှုန်းရန်၊ ဆေးကြောရန်၊ ရေထုတ်ရန်နှင့် PP/PE ဖလင်၊ PP ယက်အိတ်ကို ခြောက်ရန် အသုံးပြုသည်။
3. ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ဘေးကင်းမှု
4. အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၊ ပြီးပြည့်စုံသောသန့်ရှင်းမှုစွမ်းရည်
5. ရေနှင့်လျှပ်စစ်ကဲ့သို့ လုပ်သားချွေတာခြင်းနှင့် ပါဝါချွေတာခြင်း။
6. ဖောက်သည်လိုအပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် PURUI သည် ပေါင်းစပ်မိလ္လာစနစ်ကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
PURUI PP Jumbo အိတ်ဆေးကြောခြင်းနှင့် အလုံးလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခြင်း။:
Belt conveyor-Pre-shredder- manual sorter-belt conveyor-magnetic separator-plastic granulator/crusher- high speed friction washer-spiral feeder-twin shafts patting and separating tank-spiral feeder- floating tank- spiral feeder- ညှစ်အခြောက်ခံစက်2စုံ - အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော silo-ML160/SJ180 နှစ်ထပ်အဆင့် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် extruder
စက်အသေးစိတ် ညွှန်ကြားချက်နှင့် ပုံများ-
ဘေးလ် ကြေကွဲခြင်း။ ဖလင် သို့မဟုတ် ဂျမ်ဘိုအိတ်သည် သယ်ယူရခက်သောကြောင့်၊ စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်အညစ်အကြေးများ ပေးသွင်းသူ ပိုများလာကာ ဖလင်ကို အာမခံအဖြစ် ချုံ့ရန် ရွေးချယ်သည်။Recycler သည် ပလတ်စတစ်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဘေထုပ်ကို ချိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ရှည်လျားသော အပိုင်းအစများ ထွက်လာသော အတွင်းရိုးတံဖြင့် အာမခံကို ချိုးဖျက်ရန် ကြိုတင် ခွဲခြမ်းစိပ်စိပ်ပါ။
နှိပ်စက်ခြင်း။ အိတ် သို့မဟုတ် ဖလင်ဆေးကြောခြင်း ထိရောက်မှုကို သေချာစေရန်၊ ပေးသွင်းသူသည် ဖလင်/အိတ်ကို 14mm မှ 16mm အပိုင်းအစအဖြစ် အမြဲတမ်း ကြိတ်ချေပါ။PURUI ကမ်းလှမ်းထားသော crusher သည် wet crusher ဖြစ်သည်။Wet Crusher အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက် ၂ ခုရှိသည်။
တစ်ဖက်တွင်၊ အညစ်အကြေးများကို ရေဖြင့်ဆေးကြောရန်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ရေသည် crusher cutters ( bear-resistance) ဖြင့် အပူချိန်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
Crusher ကို ချွန်ထက်သော ဖြတ်စက်များဖြင့် လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော လည်ပတ်ပြား တပ်ဆင်ထားပါသည်။
ရေဆေးခြင်းစနစ် ထရမဲလ်roll drum သည် လျှင်မြန်စွာ လှည့်ခြင်းဖြင့်၊ ကြီးမားသော အညစ်အကြေးများကို roll drum hole ဖြင့် စစ်ထုတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ကြီးမားသော အမှိုက်များကို အောက်ခြေ ခါးပတ် ပိုက်လိုင်းဖြင့် စွန့်ထုတ်သည်။
Crusher ၏ ဓားများကို အချိန်ကြာကြာ လည်ပတ်စေပြီး ပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
အရွယ်အစားကြီးသော ဖလင်ကြိုဆေးခြင်းအတွက် အထူးအစာကျွေးခြင်းနှင့် အဝတ်လျှော်ဓါးဒီဇိုင်း
စခရင်သည် ညစ်ပတ်ပြီး 99% သဲများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
ရေဆေးစက်ဖြင့် အမှိုက်သရိုက်များကို 80% လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
ရေချိုးခြင်း။, Separating နှင့် Floating Twin shafts patting နှင့် separating စနစ်လည်ပတ်နေသော ကန်အတွင်း လှည့်နေသော အတွင်းပိုင်းကြီးနှစ်ခုသည် စေးကပ်နေသော အမှိုက်များကို ခွဲထုတ်ကာ ပွတ်တိုက်ကာ ဆေးပေးမည်ဖြစ်သည်။ရေပေါ်ကန်
ပစ္စည်းများအား ရုပ်ဒြပ်ဆွဲအားနှင့် ရေဆွဲငင်အားဖြင့် ဆေးကြောပါ။
Stainless Steel သံကြိုး နှင့် Pneumatic Drain Valves တို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေကို ချွေတာခြင်း
ဖျစ်ညှစ်သည်။လေမှုတ်စက် ညှစ်စက်တွင် ကြီးမားသောဝက်အူတစ်ခု မြှုပ်ထားသည်။ဝက်အူလှည့်ခြင်းဖြင့်၊ ပစ္စည်းကို တွန်းပြီး ချုံ့သွားပါမည်။ဤအချိန်တွင် ဇကာမှရေသည် ထွက်သွားသည်။ထို့နောက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပွတ်တိုက်မှုမှ အပူနှင့်အတူ၊ ပစ္စည်းသည် တစ်ပိုင်း အရည်ပျော်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အသေ/မှိုမှတဆင့်၊ ပစ္စည်းအား အပူချိန်မြင့်မြင့်ဖြင့် densify material အဖြစ်သို့ ဖိသိပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဤစက်သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီး အခြောက်ခံခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပါသည်။ အထွက်ပစ္စည်း၏ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကို 3% မှ 5% ကြား ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
စွမ်းရည် 300-2000 ကီလိုဂရမ်/နာရီ
လျှောက်လွှာ အစားအစာထုပ်ပိုးခြင်းရုပ်ရှင်၊ စိုက်ပျိုးရေးရုပ်ရှင်၊ ရေနံမြေတွင်အသုံးပြုသည့် အစိမ်းရောင်အိမ်သုံးရုပ်ရှင်၊ PP အိတ်၊ PE ဖလင်၊ ယက်အိတ်၊ LDPE ကျုံ့ရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် လေးလံသောပုံနှိပ်ရုပ်ရှင်၊ ဘိလပ်မြေအိတ်၊ ဆီပြန်အိတ်၊ ညစ်ပတ်သောအိတ်
သတ်မှတ်ချက် ပလပ်စတစ်ခြစ်စက်/ ပလပ်စတစ်ကြိတ်စက်၊ မြန်နှုန်းမြင့် ပွတ်တိုက်ဆေး၊ Centrifugal Dewatering Washer၊ Spiral Feeder၊ Floating Tank၊ Spiral Feeder၊ Main Shafts Rotting Tank နှစ်ခု၊ Squeezer သို့မဟုတ် Squeezer & Agglomerator။ ပါဝါချွေတာခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ လည်ပတ်နိုင်သည်။
အထွက် အမျိုးအစား ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်း၊ ရေဖြန်းခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်း၊ granulating နှင့် ထုပ်ပိုးခြင်း နောက်ဆုံးထွက်ရှိမှု၏ စိုထိုင်းဆသည် 3% မှ 5% အတွင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ပစ္စည်းကို ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်း၊ ရေဖြန်းခြင်း၊ ဖျစ်ညှစ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးထွက်ရှိမှု၏စိုထိုင်းဆသည် 2% အတွင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု တပ်ဆင်မှုတွင် အင်ဂျင်နီယာများ ရရှိနိုင်သည်။
ယခင်- PP PE ရုပ်ရှင်များနှင့် HDPE ပုလင်းများအတွက် Plastic Crusher
နောက်တစ်ခု: ML မော်ဒယ်လ် တစ်ခုတည်းသော ဝက်အူ ပလပ်စတစ် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် Extruder